Iindaba - Yintoni ekufuneka uyihoye xa uthenga iidyasi zabantwana?
Thina bantu badala sihlala siphethe iambrela xa sisendleleni. Iambrela ayinakho ukwenza umthunzi kuphela, kodwa ikwathintela nemvula. Kulula ukuyiphatha yenye yezinto eziyimfuneko kuhambo lwethu, kodwa ngamanye amaxesha akukho lula kangako ukuba abantwana babambe isambrela. Kuyimfuneko ukuba abantwana banxibe idyasi yemvula yabantwana. Zininzi iintlobo zeebhatyi zemvula zabantwana ezivenkileni. Yintoni ekufuneka sinike ingqalelo kuyo xa uthenga iidyasi zabantwana? Abavelisi bemvula yeFoshan abalandelayo baya kukuxelela ngokufutshane ngemicimbi efuna ingqalelo xa uthenga iidyasi zabantwana!
1. Izinto zerhasi yabantwana
Ngokubanzi, iidyasi zabantwana zenziwe ngezinto zePVC, kwaye iidyasi ezingcono zenziwe ngePVC kunye nenayiloni. Nokuba yeyiphi na into, kufuneka siyigcine emva kokuyithenga, ukuze idyasi yemvula ihlale ixesha elide.
2. Ubungakanani bengubo yemvula yabantwana
Xa uthenga iidyasi zabantwana, kufuneka sinikele ingqalelo kubungakanani. Abanye abazali banokucinga ukuba iidyasi zabantwana kufuneka zibe nkulu ukuze bazinxibe ixesha elide. Ngapha koko, iidyasi zabantwana ezinkulu kakhulu azilunganga, kwaye ziya kuzisa abantwana ekuhambeni. Ukuphazamiseka, kungcono ukuba abantwana bazame ngeebhatyi zemvula xa bethenga iingubo zemvula ukuze bakwazi ukuthenga i-raincoat efanelekileyo.
3. Ngaba kukho naliphi na ivumba elikhethekileyo
Vumba ukuba kukho ivumba elikhethekileyo xa uthenga iidyasi zabantwana. Amanye amashishini anganyanisekanga aza kusebenzisa izixhobo ezingafanelekanga ukwenza iidyasi zabantwana. Iidyasi zabantwana ezinjalo ziya kuba nevumba elibi. , Musa ukuthenga ukuba kukho ivumba elingaqhelekanga.
Isine, ibhegi yemvula enebhegi
Xa uthenga i-raincoat yabantwana, idyasi yemvula enesithuba sengxowa yesikolo ishiyeka ngasemva. Ngokuqhelekileyo abantwana kufuneka baphathe ibhegi yesikolo. Ke ngoko, xa uthenga i-raincoat yabantwana, kufuneka uthenge i-raincoat enendawo ethe kratya ngasemva.
Ezintlanu, iingubo zemvula zabantwana zinemibala
Xa uthenga iingubo zemvula zabantwana, qiniseka ukuba uthenge iingubo zemvula ngemibala eqaqambileyo, ukuze abaqhubi kunye nabahlobo abakude babe nokuzibona kwaye baphephe iingozi zendlela.